Mid kamid ah xisbiyada ugu waa weyn Soomaaliya oo dacwad ka gudbiyay madaxda dalka – Bandhiga
Mid kamid ah xisbiyada ugu waa weyn Soomaaliya oo dacwad ka gudbiyay madaxda dalka
Xisbiga Himilo Qaran ee uu hogaamiyo madaxweynihii dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmad ayaa maanta shir jaraa’id ku qabtay Muqdisho.
Xisbiga ayaa ku dhawaaqay in dacwad u gudbiyeen madaxda sare ee dalka oo ku aadan xayiraadda safarka Sheekh Shariif ee Kismaayo.
Qoraal uu soo qoray madaxweyne Sheekh Shariif ayaa sidan u qorn:
Iyada oo laga duulayo dhowrista iyo ilaalinta shuruucda dalka ayaan si rasmi ah dacwad ugu gudbinnay maxkamadda sare ee dalka taasi oo ku saabsan is hortaaggii sharci darrada ahaa ee xukuumaddu ay ku sameysey xubnihii xisbiga Himilo Qaran ee aan hogaaminayay kuna socdey Kismaayo xarunta KMG ee Jubaland.
Ma jirto cid ka sareysa sharciga sidaa darteed waxaan maxkamadda sare ee dalka aan ka doonaynaa cadaalad, innaga oo dacwaddana si gaar ah uga gudbinnay laanta fulinta ee dowladda oo bixisay amarkii sharci darrada ahaa.
Shir jaraa’id oo aan ku qabannay xarunta xisbiga ayaan warbaahintana kula wadaagnay, iyada oo uu u aqriyey nuqulka dacwadda aan gudbinnay xoghayaha arrimaha dibadda ee xisbiga Himilo Qaran Senator Ilyaas Cali Xasan.
Himilo Qaran waxaa ka go’an dhowrista shuruucda dalka.